Internet For Myanmar: Open Courseware
ဒီနေ့လို အင်တာနက်ခေတ် အမြဲမပြတ်သင်ယူလေ့လာနေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ သင့်အနေ နဲ့နောက်ကျကျန်နေလား?...!! ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တွေရဲ့ သင်ခန်းစာတွေက သင့်ဆီကို ပျံသန်းလာနေပါပြီ။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်ကစပြီး အမေရိကန် မန်ဆက်ချူးဆက် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(MIT) က သူတို့ရဲ့သင်ရိုးတွေကို Online ပေါ်မှ လူတိုင်းသင်ယူလေ့လာနိုင်တဲ့ Open Courseware ဆိုပြီး စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဝင်ခွင့်တွေ၊ ကန့်သတ်ချက်တွေ ဘာမှမလိုဘဲ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဘာသာကို ရွေးပြီးလေ့လာနိုင်တယ်။ အခုဆိုရင် Undergraduate အတွက် သင်ရိုးပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ရှိနေပါပြီ်။
ကျောင်းအပ်တဲ့အနေနဲ့လုပ်ရမှာက MIT web site မှာ register လုပ်ရုံပါပဲ။ သင်ခန်းစာတွေမှာ assignmentတွေ၊ projectတွေ လုပ်ရလေ့ရှိပါတယ်။ တချို့သင်ရိုးတွေက စာမေးပွဲတွေဖြေရတယ်။ သင်ခန်းစာရှင်းလင်းချက်တွေကို ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ၊ အသံဖိုင်တွေ download ကူးယူပြီးလေ့လာနိုင်တယ်။ တချို့သင်ခန်းစာတွေကတော့ မှတ်စုနဲ့ အမေးအဖြေတွေပဲပေးပါတယ်။ MITတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတွေ ရေးတဲ့ ပြဌာန်းစာအုပ်တွေလဲရှိတယ်။ Simulations (သရုပ်ပြပရိုဂရမ်)တွေ၊ Power Point presentation တွေနဲ့လဲ ရှင်းလင်းထားပါတယ်။ ကျောင်းသားအချင်းချင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ကိုလဲ discussion groupတွေနဲ့ လုပ်လို့ရတယ်။ OCW သင်ရိုးတွေက ဘွဲ့ ချီးမြှင့်မှာမဟုတ်ကြောင်းကိုတော့ ပြောထားပါတယ်။
အခုဆိုရင် MIT အပြင် တခြားနေရာတွေမှာလဲ OCW လှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေပါပြီ။ OCW လေ့လာနိုင်တဲ့နေရာတွေကတော့…….
http://ocw.mit.edu (Massachusetts institute of Technology OCW)
http://ocw.usu.edu (Utah State University OCW)
http://ocw.jhsph.edu (Johns Hopkins School of Public Health OCW)
http://ocw.tufts.edu (Tufts University OCW)
http://ocw.fhda.edu (Foothill – De Anza Community College SOFIA)
http://ocw.cmu.edu/oli/ (Carnegie Mellon Open Learning Initiative)
MIT ကသင်ရိုးတွေကို တရုတ်၊ ဂျပန်နဲ့ တခြားဘာသာတွေကိုလည်း ပြန်ဆိုထားပါတယ်။ Open Courseware တွေကို ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအပြင် ဆရာ၊ဆရာမတွေလည်း ကိုးကားဖို့ ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ Open Courseware နည်းတူတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း Open Educational Resources၊ Development Gateway ဆိုပြီး knowledgeတွေကို shareလုပ်ထားတာ တွေလဲရှိပါသေးတယ်။ topics.developmentgateway.org, www.dgfoundation.org တို့မှာလေ့လာ နိုင်ပါတယ်။
Posted by Myanmar Entrepreneurs at 2:08 AM
IT Men said...
Very good. I am the author of itmen.blogspot.com. This blog collect IT related posts from other blog. So I was copy your post to this blog and show your blog link.
agapebydk Takeapiece of me
Myanmar Internet Class (SMT Net July 2-6)
Myanmar Internet Training : CometNet (July 2-6)